Sida loogu hagaajiyo wicitaanada degdegga ah taleefankaaga casriga ah | Androidsis
Sida loo qaabeeyo wicitaanada degdegga ah ee taleefankaaga casriga ah
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Amniga, Tababarada
Hubso taas dhamaanteen waxaan leenahay xiriir ka bilawda «AA» ajandaha casriga ah. Waxaa loo maleynayaa inuu ku xiran yahay dadka muhiimka ah ee ajandaheena. Tani waa wax aan dhammaanteen samaynay si aan u helno xiriiradaan la doortay si ay ugu muuqdaan xagga sare ee ajandayaasheena. Taasna Waxaa loo adeegsaday, haddii ay dhacdo shil ama xaalad degdeg ah, waxay si fudud ula xiriiri karaan qofka la tilmaamay ee isticmaalaya taleefankayaga.
1 Xiriirada "AAA" + magaca macno badan malahan.
2 Samee nambarka wicitaanka degdegga ah iyadoo taleefanka uu xiran yahay.
Xiriirada "AAA" + magaca macno badan malahan.
Laakiin taxaddarkani oo noo adeegay wakhti hore ayaa hadda gaboobay. Ku darida xiriiriyeyaasha aan ku kalsoon nahay "AAA" magaca hortiisa macno badan malahan. Iyo inkasta oo ay tani tahay wax aan dhamaanteen kula talinay olole isla Ururka Laanqayrta Cas. Wax badan ma qabanayso mar dambe.
Meelaha laga isticmaalo maanta wax badan ma qabato in marka hore lala soo xiriiro haddii aanan furi karin taleefanka. Bal qiyaas daqiiqad aan markhaati ka nahay suuxdinta qof ee waddada. Marka lagu daro la-talinta adeegyada gurmadka ee u dhigma muwaadiniin wanaagsan, waxaa nagu soo dhaca inaan la xiriirno qoyskaaga. Si tan loo sameeyo, waxaan ka soo qaadnaa taleefanka dhibbanaha dhulka, laakiin markaan rabno inaan raadino xiriir: «galaan qaabka furitaanka».
Marka tan la eego, wax yar ayaan qaban karnaa. Aad ayey noogu adkaan doontaa inaan ku helno xiriirada taleefanka lambar ama quful qaab ah. Laakiin haddii aan fiirsanno, oo ka hooseeya dhibcaha si loo soo bandhigo qaabka, ama lambarrada koodhku wuxuu leeyahay «Degdeg». Taleefanka, xitaa qufulka, ayaa noo oggolaan doona inaan wicitaan degdeg ah sameyno. Laakiin sida la tilmaamay, waxay kaliya noo oggolaan doontaa inaan garaacno lambarrada adeegyada gurmadka. Laakiin ka waran haddii aan rabno inaan u sheegno xubin qoyska ka tirsan?
Maanta barnaamijka 'Androidsis' waxaan ku bari doonaa sida loo qaabeeyo xiriirada (yada) aan dooneyno lambarrada deg-degga ah. Sidan oo kale, haddii qof doonayo inuu wicitaan degdeg ah ka sameeyo taleefannadeena casriga ah, wuu wici karaa, tusaale ahaan, lamaanahayaga, ama waalidiinta, iyadoon loo baahnayn inay galaan buuga taleefanka ee xarunta. Waa maxay?. Sii wad akhriska.
Samee nambarka wicitaanka degdegga ah iyadoo taleefanka uu xiran yahay.
Nasiib darrose, si ka duwan iOS, Android illaa iyo imaatinka nooca ugu dambeeya ee Android ma aysan haysan suurtagalnimadaas. Laakiin haddii taleefankaaga casriga ahi aanu wali helin casriyeyntii muddada dheer la sugayay, waxaan sidoo kale ku siineynaa xal. Helitaanka xulashada dejinta taleefankeena. Laga soo bilaabo Settings waxaan ka raadineynaa Lock Screen. Marka aan gudaha galno waa inaan galnaa qaybta Amniga. Ugu dambeyntiina waan helnaa Macluumaadka milkiilaha.
Markaan halkaan awoodno macluumaadka milkiilaha ka dhigo mid muuqda. Iyo goobta la heli karo si loo soo geliyo macluumaadkan waxaan ku dari karnaa lambarka taleefanka ee aad rabto. Sidan oo kale, lambarka taleefanka la doortay ayaa had iyo jeer ka muuqan doona shaashadda taleefanka ee qufulan.. Markaa haddii qof helo taleefankeenna, waxay kaloo naga caawin kartaa inaan kula soo xiriirno haddii aad raadineyso milkiilaha.
Waqtiyadan dambe taleefannadeenna casriga ahi waxay ku ilaashadaan xogteena gaarka ah xamaasad iyo aad u badan. Tanna waxaan u leenahay noocyo badan oo qufullo ah. Qaabab aan suuragal ahayn oo qaabaysan, nambarada xarfaha, iyo hadda faraha sidoo kale. Ma aha in la xuso waxa ku xiga, iris akhriska ama aqoonsiga wajiga. Waxaas oo dhami way fiican yihiin si loo ilaaliyo xogteenna. Laakiin waqti ka waqti way wanaagsan tahay in laga fikiro in mararka qaar aan u baahanahay qof adeegsada taleefanka casriga ah si uu noo caawiyo.
Waxaa jira codsiyo badan oo isboorti ah oo naga caawiya inaan is daryeelno. Dhamaanteenna waxaynu leenahay qaar ka mid ah App la xiriira caafimaadka oo ku rakiban aaladeena aan u isticmaalno inaan ku keydinno xogta. Ama xitaa si loo aqoonsado astaamaha ama loo isticmaalo daaweynta. Laakiin Way mudan tahay in la tixgeliyo talooyinkaan si taleefannada casriga ah ay sidoo kale ugu adeegaan inay naga caawiyaan xaaladaha degdegga ah.
Haddii taleefankaaga casriga ahi horeba u leeyahay nooca loo yaqaan 'Android 7.0 version' oo lagu rakibay, waxaad si toos ah isugu hagaajin kartaa lambarrada gurmadka. Marka qofkii hela taleefankaaga wuxuu wici karaa lambarka aan horey u qaabeynay. Laakiin haddii kale, waxay noqon kartaa caawimaad weyn in xiriir laga dhigo mid muuqda oo iyagu ay u jeedsan karaan haddii shil ama khasaaro dhacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » Sida loo qaabeeyo wicitaanada degdegga ah ee taleefankaaga casriga ah
Dacwadda ku-xadgudubka patent-ka ee u dhexeysa Apple iyo Samsung waxay ku laabanaysaa asalkeedii
Meizu M5s ayaa diyaar u ah in la soo bandhigo todobaadka soo socda